पाचन क्षमता बलियो बनाउँन याद गर्नै पर्ने कुराहरु, के तपाईलाई थाहा छ ? - ज्ञानविज्ञान
पाचन क्षमता बलियो बनाउँन याद गर्नै पर्ने कुराहरु, के तपाईलाई थाहा छ ?
10 months ago mygyanbigyan
हामीले जे जति खान्छौ, सबैकुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ । कतिको पचाउने क्षमता त एकदमै कमजोर हुन्छ । यस्तो व्यक्तिको अनुहार रुखो, जिर्ण र फिका देखिन्छ ।
त्यसैले स्वस्थ्य बन्न होस् वा सुन्दर बन्न, पेट सफा हुनुपर्छ । पाचन क्षमता बलियो हुनुपर्छ । हामीले खाएको खानेकुरा राम्ररी पच्यो भने शरीरमा पोषणको अभाव हुँदैन ।
शरीर स्वस्थ्य र तन्दुरुत हुनुका साथै रगत पनि सफा हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो छालाको सौन्दर्यमा पनि प्रभाव पार्छ ।
तर, यसरी बढाउनुहोस् आफ्नो पाचन क्षमता:
१. जब तपाई खाना खानुहुन्छ, त्यसको भरपुर आनन्द लिनुहोस् । आर्युवेदका अनुसार शारीरिक स्वस्थ्य कायम राख्नका लागि मनबाटै भोजन गर्नुपर्छ । खाना खाएको बेला आरामसँग बस्नुहोस् । सहि मुद्रामा बस्नुहोस् । यसले तपाईको पाचन यन्त्रले ठीक ढंगले काम गर्छ ।
२. पाचनलाई उत्तेजित तुल्याउनुहोस् । अर्थात एक टुक्रा अदुवा लिनुहोस्, त्यसमा कागतीको रस मिसाउनुहोस् । थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् । यसले तपाई जतिपनि गरिष्ठ एवं भारी भोजन गर्नुहुन्छ, सजिलै पच्छ । आर्युवेदमा पनि भोजन पचाउनका लागि केहि काइदा बताइएको छ, जसमध्ये यो पनि एक विधी हो । यसले बोसो घटाउँछ र पाचन सहि राख्छ । यस्तो विधीलाई डाइएजेस्टिभ फायर विधी भनिन्छ ।
३. कोल्ड डिङ्स र फास्टफूड सेवन नगरौं । यसले शरीरमा नराम्रो कोलोस्टोर बढाउँछ । वोसो बढाउँछ । यसले पाचन प्रक्रियालाई असर गर्छ ।
४. आर्युवेदका अनुसार पाचन क्रिया दुरुस्त राख्नका लागि सहि र नियमित दिनचर्या पालना गर्नुपर्छ । बिहान नास्ता, मध्यन्ह भोजन र राती भोजन सहि समयमा गर्नुपर्छ । राती भोजन गरिसकेपछि तुरुन्तै सुत्नु हुँदैन । राती हल्का भोजन गर्नुपर्छ । बिहान पौष्टिक खानेकुरा खानु पर्छ ।
५. कहिले कहिं हामी काम गर्दै यति धेरै खानेकुरा खान्छौ कि, जसलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ । चाहे टेलिभिजन हेरिहेको बेला होस् वा कसैसँग भलाकुसारी हामी खाइरहन रुचाउँछौ । यसरी एकै स्थानमा बसेर लामो समयसम्म खानु हानिकारक हुनसक्छ । त्यसैले खाने तालिका अनुसार ठीक–ठीक समयमा मात्र खाने गरौं । जतिपनि बेला खाइरहने बानीले पाचन यन्त्रमा असर गर्छ ।
६. खानेकुरा त्यतीमात्र खानुपर्छ, जति शरीरलाई आवश्यक छ । मीठो लाग्यो भन्दैमा अनावश्यक खानेकुरा खाएर पेट भारी हुन्छ ।
७. त्यसैले खानेकुरामा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसैले यस्तो खानेकुरा सेवन गरौ, जो सुपाच्य र सन्तुलित होस् । यसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त र बलियो राख्छ ।
पाचन प्रक्रिया बिग्रिएको अवस्थामा के खाने ?
खाएर मात्र मानिस स्वस्थ र बलियो हुन्छ भन्ने हुदैन | पाचन प्रक्रिया अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा हाम्रो कोहिकोहि साथीभाइ जति खाएपनि न मोटाउछ न बलिया नै हुन्छन | पाचन प्रक्रिया असन्तुलित भएमा त्यहीँबाट सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका रोग लाग्न सुरु हुन्छ । त्यसैले पाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यी हुन् पाचन प्रक्रिया गडबडी भएमा प्रयोग गर्ने ६ खाद्यपदार्थ
मेवामा पपिन नामक इन्जाइम हुन्छ । जसले प्रोटिनलाई टुक्र्याएर पचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसबाट विभिन्न प्रकारका भिटामिन र खनिज पनि पाइन्छ । त्यसैले मेवा सेवनको २४ घन्टाभित्रै पाचन प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्छ ।
दहीमा यस्तो रासायनिक पदार्थ हुन्छ, जुन दूधमा समेत पाइँदैन । त्यसैले दूधभन्दा दही बढी स्वस्थकर मानिन्छ । यसको सेवनले पेट दुखाइ, अपच, कब्जियत, ग्यास्ट्रिकजस्ता समस्यामा पनि राहत मिल्छ ।
दहीबाट पाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने ब्याक्टेरिया पाउन सकिन्छ । यसमा उच्च क्वालिटीको प्रोटिनसमेत हुन्छ ।
केरा फाइबरयुक्त फल हो । यसले इन्सुलिन र कैयौँ स्वस्थकर ब्याक्टेरिया वृद्धि गर्ने भूमिका खेल्छ । त्यसैले पाचन प्रक्रियामा गडबडी आएमा केराको पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
पाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन अदुवाले पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसलाई दैनिक खानामा प्रयोग गरेर पनि लिन सकिन्छ । यसले खाना पचाउने इन्जाइम उत्पादनमा भूमिका निर्वाह गर्छ । एक गिलास मनतातो पानीमा दुई चम्चा अदुवाको रस राखेर पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्याउमा अत्यधिक फाइबर हुन्छ । त्यसैले पाचनसँग सम्बन्धित समस्या भएमा नियमित रूपमा स्याउ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । खाना खाएको १५ मिनेटपछि स्याउको प्रयोग गर्दा पाचन प्रणालीलाई चुस्त राख्ने काम गर्छ ।
पाचनका लागि भुइँकटहर पनि निकै उपयुक्त फल हो । यसमा ब्रोमेलिन इन्जाइम हुन्छ, जसले खाना पचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
खाली पेटमा मनतातो पानीका फाइदा छोटकरीमा
पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ । यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो । खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो । प्राय: जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन् । पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन् । यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ।
खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ । आन्द्रामा फ्लसखाली पेट प्रशस्त पानी खादा पेटका विकार शौचमार्फत जाने र पेट सफा हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ । तपाईलाई एक बिहानै शौच आउदैन भने कम्तिमा दुई गिलास मन तातो पानी खाली पेट खाँदा खुलेर शौच आउछ ।
तपाई बाथरुम जाँदा शरिरका उत्तेजित र विकारलाई बाहिर फालिदिनुुहुन्छ । जतिधेरै पानी पिउनुहुन्छ त्यति धेरै विकार शरिरबाट फाल्न सहयोग पुग्छ । भोक बढाउछनियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर भोक लागेन भने के गर्ने ? खाली पेट पानी पिउदा तपाईको भोग जाग्छ । बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा दुई गिलास पानी पिउनुहोस् । तपाईलाई भोक लागिरहन्छ ।
मानिसलाई बारम्बार टाउको दुख्नुको मुख्य कारण प्रर्याप्त पानी नपिउनु हो । डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण नै टाउको दुख्नु हो । तसर्थ बिहान उठ्नेवित्तिकै पानी खानु भयो भने यो समस्याबाट मुक्ती मिल्छ । टाउको दुख्नबाट बचाउनको अतिरिक्त यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट जोगाउछ ।
पानी पिउदा कोलोन सफा गरिदिन्छ । एक गिलास पानी खाली पेट खाँदा कोलोनमा जम्मा भएको लेदो र विकार सफा गरिदिन्छ । कोलोन सफा भएमा शरिरलाई आवश्यक पोषक तत्व शोषण गर्न सहयोग पुयाउछ। तपाईको कोलोन सफा भएमा समग्रमा सम्पूर्ण शरिर नै स्वस्थ हुन्छ ।
यदि तपाईले डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने खाली पेट पानी खानु उत्तम उपाय हो । पानी पिउदा कम्तिमा पनि २४ प्रतिशतले मेटाबोलिजमलाई बृद्धि गर्छ । यसको अर्थ तपाईले चाँडो र प्रभावकारीरुपमा खाना पचाउन सक्नुुहुन्छ । जसका कारण छोटो समयमा नै तौल घट्छ ।
यदि तपाईलाई अल्छि लागेको छ भने एक गिलास पिउनुहोस । खाली पेट पानी खाँदा रगतका रक्त कोषिकालाई चाँडो बढ्न सहयोग पुयाउछ । जति धेरै कोषिकाको बृद्धि हुन्छ त्यति नै धेरै शरिरमा अक्सिजन प्रबाह हुन्छ । यसको अर्थ तपाईमा एक प्रकारको उर्जा मिल्छ ।
दूध र वेसारका फाइदा, यस्ता छन्
दैनिक दूध र वेसार मिसाएर सेवनले शरीर सुडौल बनाउन पनि मद्दत गर्छ। मन तातो दूधमा वेसार मिसाएर खानाले शरीरमा जमेको बोसो घट्दै जान्छ। कलेजो सम्बन्धी रोगहरुको सम्भावना कम गर्छ।
यसका साथै यो एक राम्रो एन्टीसेप्टिक हुनाले अल्सरलाई पनि कम गर्छ । यसले पाचन प्रणलीमा सुधार ल्याउँछ र अपच, पखाला जस्ता समस्या हुन दिदैँन र महिलाहरु महिनावारी भएको बेला दूध र वेसार मिसाएर पिउनाले दुखाई कम हुन्छ।
दूध र वेसार मिसाएर दैनिक पिउनाले शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पुग्छ। यसले गर्दा हाडहरु बलियो र स्वस्थ्य हुन्छ। दूध र वेसारले शरीरमा रक्तसञ्चार बढाउने हुनाले कानको दुखाइ जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा दिलाउँछ।
त्यस्तै यसले रगत सफा पनि गर्छ। दैनिक दूध र वेसार मिसाएर पिउनाले अनुहारमा चमक आउँछ।
सानो कपासको डल्लालाई दूध र वेसारको मिश्रणमा चोबेर अनुहारमा लगाउँदा पनि अनुहारको कान्ती बढ्नुका साथै अनुहार सफा र उज्यालो हुन्छ। साथै छाला सम्बन्धी अन्य समस्याहरु हटाउन पनि यसले मद्दत गर्छ।
यस्ता केही चिज मिसाएर दहीमा खाएमा शरिरलाई यसको दुईगुणा फाइदा हुन्छ
दहीमा ज्वानो मिसाएर खानाले बाबासीरको रोगीलाई फाइदा पुग्छ । दहीमा ज्वानोलाई पिसेर मिसाउनुहोस् ।
मह र दही दुवै स्वास्थको लागि धेरै नै फाइदाजनक छ । यदि यी दुई चिजलाई मिसाएर खाएमा अनुहारको फोका, दागहरु ठिक हुन्छ र अन्यखालका समस्याहरु टाढा हुन्छन् ।
दहीमा केरा मिसाएर खानाले पेटको कैयौं समस्याहरु ठिक हुन्छन् । यसको साथै रक्तचाप पनि नियन्त्रणमा रहन्छ ।
दहीमा जौ ओट्स मिसाएर खानाले शरिरलाई क्याल्सियम, पोटासियम र प्रोटिन मिल्छ जसले हड्डी मजबुत हुन्छ ।
यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने दहीमा सौफ मिसाएर खानुहोस् । यसले यो समस्या पनि टाढा हुन्छ । यस बाहेक ग्याँस र जलनबाट पनि रहात मिल्छ ।
६. कालो मरिचः
यदि तपाईको तौल अत्याधिक धेरै छ भने दैनिक दहीमा कालो मरिच र बिरेनुन मिसाएर खानुहोस् । यसले शरिरमा जम्मा भएको बोसो कम गर्छ र तौल कम हुन्छ ।
केही मानिसलाई माइग्रेनको समस्या हुन्छ । यो दुखाई धेरै नै भयानक हुन्छ । यदि दही र भात मिसाएर खाएमा यसबाट धेरै आराम मिल्छ ।
८. विरेनुन र भुटेको जिराः
दहीमा विरेनुन र भुटेको जिरा राखेर खानाले स्वाद र भोक बढ्छ । यस बाहेक यसले पाचन प्रणाली पनि राम्रो हुन्छ ।
दहीमा चिनीको साथमा ड्राइफ्रुट्स मिसाएर खानुहोस् । यसले कमजोरी हट्छ र तौल पनि कम हुन्छ । यसका साथै तपाई दिनभर फुर्तिलो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
Don't Miss it हड्डी के हो ? के रोग लाग्छ हड्डीमा ? यस्ता छन् लाग्ने रोगहरू
Up Next किन आउँछ( अपन वायु ) पाद ? तपाईंलाई थाहा छ ? पाद रोक्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ
के तपाईलाई ढाड दुख्ने समस्याले हैरान बनाएको छ ? यस्ता छन उपचार विधि
ढाड दुख्ने समस्याले धेरैलाई हैरान बनाएको हुन्छ । चिकित्सककहाँ बिरामी धाउनुको प्रमुख समस्यामध्ये यो पनि एक हो । सही उपचार…
तपाइलाई फिस्टुलाका लक्षणहरु त देखा परेकाे छैन ? के हो फिस्टुला, यसकाे उपचार बारे जानिराखाै
फिस्टुलाका केही प्रकारहरु हुन्छन् । तर, यसका सबैभन्दा प्रचलित प्रकार हो एनल फिस्टुला । एनल फिस्टुला एउटा सानो नली समान…
तनावमा पेट पोल्ने र दिसा लाग्ने हुन्छ ? हुन्छ भने यति जानकारी लिइराख्नुहोस्
पेट पोल्नुको विभिन्न कारणहरु मध्ये तनाव पनि हुन सक्छ । तपाईले यसबारे जानकारी लिनु भएको छ ? तनावमा पेट पोल्ने…
लक्षणहरु देखा परिसकेपछि उपचारै हुन नसक्ने रोग हो रेविज, कसरी बच्न सकिन्छ ? सम्पुर्ण जानकारी
रेबिज शत प्रतिशत प्राणघातक रोग हो । त्यस कारणले यो जनस्वास्थ्यमा ठूलो खतरा र चिन्ताको विषय बनेको छ। तर सबैभन्दा…
मानसिक रोग सुन्नु भएको छ ? अब यसबारे सम्पुर्ण जानकारी पढ्नुहोस्
नेपालमा एक दिनमा औसत १६ जनाले आत्महत्या गर्छन् । यसरी हेर्ने हो भने तपाईले यो पढेको दिनमा पनि लगभग १६…
धार्मिक रुपमा होस वा प्राकृतिक रुपमा होस तुलसीको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसको सेवन वा प्रयोग गर्नाले धेरै कुरा…
हामी स्वादको चक्करमा स्वास्थ्यलाई पार्दैछाै बर्बाद, जंक फूडले यसरी पार्दैछ शरीर सखाब
अहिलेका पुस्ताको मेनुमा के कस्ता खानेकुरा छन् ? चाउचाउ, चाउमिन, मम, पिज्जा, बर्गर, स्याडविच इत्यादी । घरमा पकाइने खाजामा उनीहरु…
मृगौला जोगाउन चाहनु हुन्छ भने भुलेर पनि नखानुस् यी खानाकुरा
मृगौला हाम्रो शरीरको निक्कै संवेदनशील अंग हो । बाच्नका लागी नभई नहुने चिज हो । यो अंगमा खरावी आयो भने…
यस्ता ६ फलफुलमा पाइन्छ अत्याधिक मात्रामा प्रोटिन, जान्नुहाेस्
अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभर्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा ला रिसर्च अग्रोनोमिकका शोधकर्ताहरूले ८१ हजार जनामाथि एक अनुसन्धान गरे । उक्त…
चिसोमा सुन्तला खानुका केहि फाइदा
कतिपयमा चिसोमा सुन्तला खानु हुँदैन भन्ने धारणा छ । तर चिसो मौसम र चिसो ठाँउमै फल्ने सुन्तलाको महत्व छुट्टै छ…
काजु र बदाम खानुकाे अचुक फाइदाबारे जान्नुहाेस्
काजु तथा बदाम खानमा जतिनै स्वादिष्ट हुन्छ त्यतिनै शरीरका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । काजु तथा बदाममा शरीरलाई चाहिने पोषक…
5 months ago Pradeep Karki
कालो अंगुर खाँदाका फाईदाहरु थाहा पाउनुहोस्
स्वास्थको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ अंगुर । त्यहि माथि कालो अंगुरको त झन् कुरै छोडुम । गर्मि मौसममा कालो…
कतिसम्म तपाईको मदिरा पिउने बानी छ ? यस्तो छ कलेजोमा मदिराको प्रभाव – जान्नुहोस्
मदिरा सेवनका कारण संसारमा प्रतिवर्ष २.५ देखि ३ लाखको ज्यान जाने गरेको तथ्यांकले देखाएका छन् । यो समस्या १५ देखि…
घरेलु उपचार (48)